Transcript: Niantehitra tamin'ny Lufthansa sy ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka hafa ny Okrainiana Airlines alohan'ny hanadiovany ny PS752 ho amin'ny fiaingany ao Tehran
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Transcript: Niantehitra tamin'ny Lufthansa sy ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka hafa ny Okrainiana Airlines alohan'ny hanadiovany ny PS752 ho amin'ny fiaingany ao Tehran
Nanamarina ny Okrainiana Airlines: nodiovina i PS752 tany Teheran tamin'ny 8 Janoary, satria i Lufthansa, Austrian Airlines, Turkish Airlines, Qatar Airways, ary Aeroflot dia niainga avy tao Teheran ihany koa ary manodidina ny fotoana nanomanana ny sidina Ukraine International PS752 handeha Kyiv.
Tao anaty fanambarana iray nalain'i eTurboNews, Nanaiky ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Okraina fa manaraka zotram-piaramanidina hafa. Izany dia voalaza tamin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety tamin'ny 11 Janoary tao Kyiv. "Ny sidina avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao dia nanidina teo alohanay ary nanidina nanaraka anay. Mampalahelo fa afaka milaza isika fa ny toerana misy ny fiaramanidintsika dia tamin'ny fotoana tsy nety. Mety ho fiaramanidina hafa izay niasa tamin'izany fotoana izany tao amin'ny seranam-piaramanidina Tehran. ”
eNilaza ny TurboNews fa tokony ho tompon'andraikitra amin'izany ireo mpitatitra hafa noho ny fianjerana sy ny fametrahana ny mpandeha azy ireo amin'ny loza lehibe.
Androany dia nanamafy tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ny manampahefana misahana ny fiaramanidina Iraniana fa balafomanga roa no nitifitra ny sidina Ukraine International Airlines tamin'ny fiandohan'ity volana ity ary namono ny olona rehetra tao anatiny.
taorian'ny eTurboNews namoaka lahatsoratra omaly momba ny fandrahonana ny fanenjehana ny kilasin'ny raharaha tany Canada, ny Okrainiana Airlines dia namaly tamin'ny fandikana ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety tamin'ny 11 Janoary.
eTurboNews dia mamoaka an'ity sora-tanana ity tsy misy fanovana ary tsy misy hevitra:
“Izaho no Yevhenii Dykhne, filohan'ny Ukraine International Airlines (UIA). Mirehareha amin'ny satako aho, mirehareha amin'ny satan'ny filohan'ny orinasa, izay, nandritra ny 27 taona, dia noheverina ho laharam-pahamehana indrindra ny fiarovana ny sidina mpandeha.
“Hatrany am-piandohana dia azonay antoka fa tsy nisy lesoka mpanamory na tsy fetezana ara-teknikan'ny fiaramanidina noho ny hadisoan'ny orinasa; nijery ny tenantsika manohitra ny fitsipika anatiny rehetra izahay, nanamarina ny tenanay ary nanjary resy lahatra fa tsy maintsy nisy antony ivelany. “Rehefa nanomana ny kaonferansa vaovao androany izahay dia nanana fandaharam-potoana hafa. Tianay holazaina aminao ny maharary anay nandritra ny telo andro. Raha ny marina, telo andro fotsiny no natao ho antsika, tsy haiko, toy ny telo herinandro na telo volana - zava-nitranga marobe, enta-mavesatra toy izany ho an'ny mpiasa mpiasa amin'ny krizy izay nandamina ny asa tamin'ny havan'ireo mpandeha maty, miaraka amin'ny ny fianakavian'ireo mpikambana ao amin'ny ekipa malalantsika.
“Fa io maraina io dia nisy hafatra avy any Tehran nanova ny fandaharam-potoananay. Mety hiteny aho fa fantatray fa hitranga izany, saingy nahazo maivamaivana izahay nahazo vaovao androany, satria tsy misy ny tombantombana hoe nanao zavatra tsy nety ny orinasa raha toa ka misy fiarovana. Izahay dia orinasa azo antoka, orinasa azo atokisana miaraka amin'ny be indrindra, tsy matahotra aho milaza, mpiasa mahay manerana an'i Okraina sy miaraka amin'ny antsika manokana - izay tsy dia be loatra any Okraina - miaraka amin'ny ivon-toerantsika manokana eto amin'ny seranam-piaramanidina Boryspil . Manana ny fotoana rehetra azo antoka hipetraka ho laharam-pahamehana izahay - ny fiarovana.
“Nandritra izay telo andro izay dia nahavita asa be ny ivon-toerana misy ny krizy. Mandeha ny asa any amin'ireo firenena izay niondrana an-tsambo fiaramanidina anay. Any Canada, efa misy ivon-toerana iray efa miasa ary mihazakazaka hiara-hiasa amin'ireo havan'ireo niharam-boina. Ao Iran, misy ivon-toerana manokana natsangana tao amin'ny biraon'ny solontena mba hifandraisany amin'ireo fianakavian'ireo maty nandritra ny fianjerana. Navoaka ny laharana mafana, izay efa ampiasain'ny havany - ny eropeana sy ny Okrainiana. Ny orinasa dia miasa misaraka amin'ireo havan'ireo mpiasanay.
“Na izany aza, mino aho fa raha dinihina ny fandaharam-potoana vaovao, dia tokony hiresaka ilay fanontaniana izay apetraka matetika matetika isika: naninona no nanao sidina nankany Tehran ny kaompaniam-pitaterana?
Fa maninona no tsy nampiato ny asany ny kaompaniam-pitaterana?
Te-hilaza aho fa, raha ny fomba fiasa no jerena, izay mazava sy takatra amintsika mpahay momba ny fiaramanidina sivily dia tsy mazava amin'ny besinimaro. Ny sidina fiaramanidina sivily dia tanterahina amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana navoakan'ny firenena roa: ny iray izay anaovana ny sidina, ny toerana misy azy dia fehezin'ny masoivohom-panjakana, ny serivisy fiaramanidina ary ny seranam-piaramanidina ao amin'ny firenena izay anisany ny sainam-piaramanidina. miasa ny sidina.
“Tamin'ny fotoana nialan'ny sidina Boryspil seranam-piaramanidina dia tsy nisy fampahalalana momba ilay fandrahonana mety hitranga ny zotram-piaramanidina.
Rehefa nandao ny seranam-piaramanidin'i Tehran izy dia mitovy tanteraka ilay zavatra sy ilay seranam-piaramanidina, ary tsy nisy fanapahan-kevitra navoakan'ny mpitantana tompon'andraikitra tonga teo am-pelatananay. “Ohatra, nandritra ny fifanolanana nisy teo amin'i India sy Pakistan, nanambara ny fijanonan'ny sidina mankany amin'ny habakabaka pakistaney ny manampahefana misahana ny fiaramanidina sivily. Ho fanampin'izay, ny zotram-piaramanidina rehetra eto amin'izao tontolo izao dia manaraka io fepetra io araka izay azony atao. Misy ny fitsipika iraisam-pirenena momba ny fitondran-tena eo amin'ny sehatry ny seranam-piaramanidina sivily, ny fihetsika tokony hataon'ny seranam-piaramanidina.
“Te hampiasa an'ity mpihaino iraisam-pirenena midadasika ity aho hanolotra fiaraha-miory amin'ny alàlan'ny UIA Airlines ary amin'ny anarako manokana ho an'ireo mpandeha rehetra sy ny havan'ny mpandeha rehetra amin'ny sidinay izay manerana an'izao tontolo izao. Mbola tsy nifandray tamin'ny rehetra izahay
. Miarahaba indrindra. Mahatsapa ny alahelo lalina izahay miaraka amin'ny havan'ireo mpandeha sy ny havan'ireo mpiasa ao aminay, ny ekipa malalanay.
“Tiako ny filoha lefitry ny zotram-piaramanidina ho an'ny Operations amin'ny sidina mba haneho hevitra momba ny teniko sy ny fihetsik'ilay kaompaniam-pitaterana nandritra ny niaingan'ny seranam-piaramanidina Tehran.
Fa inona ity? Izy io dia mifandraika amin'ny zava-misy ankehitriny, na dia ao amin'ny fanambarana navoakan'i Iran aza, dia hitantsika ny fambara fa nihetsika tsy miankina ny ekipanay ary toa tsy tamin'ny fomba mety nanaovany azy. Azafady, Ihor, lazao anay izay mitranga eny amin'ny habakabaka ambonin'ny seranam-piaramanidin'i Tehran taloha, nandritra sy taorian'ny sidina, ary ny fihetsiky ny ekipanay - zava-dehibe izany. ”
Ihor Sosnovsky: “Salama tsara! Ihor Sosnovsky, filoha lefitry ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Ukraine. Niasa tao UIA nandritra ny 27 taona aho, mihoatra ny 20 amin'izy ireo no miandraikitra ny fizotran'ny sidina. Niasa ho an'ny UIA hatramin'ny andro voalohany aho, dia reharehako izany.
“Ny orinasa dia manana rakitsoratra fiarovana tsara indrindra hatramin'ny Novambra 1992. Manao izay fara herinay izahay mba hahazoana antoka izany amin'ny lafiny matihanin'ny olona, ​​ny fiarovana ara-tsosialy azy ireo ary ny famoronana rivo-piainana mahafinaritra sy tsara iasana. Ny teny goavambe - manisy fahasamihafana ny olona - no tena zava-dehibe kokoa amin'ny fiaramanidina mihitsy; manana dikany hafa izy ireo, mamiratra kokoa ary, ao anaty paosy, mbola mazava kokoa aza.
“Koa tiako ho henonao indray ny anaran'ireo olona tao amin'ny sobabin'ny Flight 752: ny Kapiteny Volodymyr Gaponenko miaraka amin'ny ora sidina 11,600, Oleksiy Naumkin - mpanamory mpampianatra / mpanamory mpampianatra, traikefa manidina 12,000 7,600 ary Serhii mpiara-manidina Khomenko, izay nanana ora sidina XNUMX ora.
“Ireo mpanamory sidina izay tao anaty sambo dia ahitana an'i Kateryna Statnik, izay niara-nanidina tamin'i UIA nandritra ny 6 taona sy tapany, Valeriia Ovcharuk - 3 taona 8 volana, Ihor Matkov dia nanokana 11 taona sy tapany ho an'ny UIA. Nahomby tamin'ny fifaninanana lasa mpanamory fiaramanidina izy ary tokony hanao fiofanana tamin'ny lohataona. Ary teo koa i Yuliia Solohub - 1 taona sy 8 volana, Mariia Mykytiuk - 2 taona sy 8 volana, Denys Lykhno - 1 taona sy 7 volana.
Nataoko lisitra ireo tarehimarika ireo sy ora an'arivony an'habakabaka mba hahafantaranareo fa ireo olona ireo dia nanao fiainganana an-jatony sy fidinana an-jatony isan-taona, ao anatin'izany ny seranam-piaramanidina Tehran, izay sidina UIA no nanidina in-dimy isan-kerinandro nandritra ny dimy taona. "
Ka ny sidina tamin'io andro io dia tsy zava-baovao ho an'ny mpiasan'ny UIA. Fiaramanidina mahazatra sy mahazatra avy any Tehran mankany Kyiv io. Tonga tao amin'ny fiaramanidina ny olona, ​​nanomana azy, nahazo alalana hanangana motera, niainga avy teo amin'ny seranam-piaramanidina araky ny fahazoan-dàlan'ny mpitantana ny fifamoivoizana; taorian'ny fiaingan'izy ireo dia nandeha tamin'ny rivotra izy ireo, mifanohitra amin'izay nolazain'ny Iraniana - fa tsy nifandray izy ireo.
Nandeha tamin'ny rivotra tokoa izy ireo ary nilaza hoe: 'Mialà!' tamin'ny feo milamina tanteraka, nahazo alalana fanampiny hanatanterahana ny sidina ary niroso tamin'ny fomba hentitra araka ny fahazoan-dàlan'ny mpitantana ny fifamoivoizana.
“Amin'ny vanim-potoanan'ny fampahalalam-baovao, heveriko fa, hadalana mihitsy ny manandrana manafina zavatra, ka raha mamelona ny findainao izao ianao, dia velomy ny app radar sidina, ho hitanao ny toerana misy azy, amin'ny faharoa, isaky ny fiaramanidina. ianao dia te. Amin'ny ankapobeny, na ianao na isika dia tsy mila ireo firaketana ny angon-drakitra momba ny sidina na rakipeo feo antenaina izay andrasantsika.
Eny an-kianja dia nijanona ny fifandraisana tamin'ny serivisy fanaraha-maso ny fifamoivoizana an'habakabaka, izay nitarihana ny ekipa, izay afaka mampiseho sy manaporofo ny maha-marina ny fihetsiky ny ekipa fa ny fampiharana ny Flight Radar dia mampiseho izay rehetra nitranga nandritra ny sidina.
Azonao atao ve ny mametraka slide vitsivitsy? “Ity slide ity dia mampiseho fivoahana avy any amin'ny seranam-piaramanidin'i Tehran amin'ny alàlan'ny seranam-piaramanidina samihafa tamin'ny andro niaingantsika. Ny tsipika manga dia isika. Ity ny sidina Qatari izay nivily niankavanana, ity ny sidina KK. Ho asehontsika izao ny sidina rehetra izay natao tamin'ity andro ity alohan'ny hiaingananay.
Jereo fa eo amin'ny lalan'ny zotram-piaramanidina ny fiaramanidina, avy eo nanomboka nivily havanana izy, ary taorian'izay dia nanao veloma azy izahay. Ity no làlan'ny fiaramanidina hafa rehetra miala amin'ny seranam-piaramanidina Tehran amin'izany andro izany. “Azoko atao ny manao slide hafa, azafady?
Izany dia, raha ny angom-baovao avy aminay, ny fiaingan'ny PS 752 amin'ny 2 Novambra ka hatramin'ny 8 Janoary. Ity daholo ny sidina ataontsika, avy amin'ny kaompaniam-pitaterana anay, izay nataontsika nanomboka teo. Ny mena dia manamarika ny fihetsiky ny fiaramanidintsika ary tsy nisy ny fiviliana amin'ny zotra izay mety ho voataona.
“Azoko atao ny manao slide hafa, azafady? Momba ny haavon'ny sidina. Ireo no làlan'ny sidina fiaramanidina, mombamomba ny sidina. Amin'ny mena, hitantsika indray ny sidina 752 ho an'ny 8 Janoary. Azafady azafady fa tsy mila fahiratan-tsaina firy ianao hamoronana an'ireto slide ireto: ity no fampiharana Flight Radar mahazatra indrindra, izay azonao atao ny manokatra ary manamarina ny teniko rehetra mankany amin'ny faharoa.
“Azoko atao ny manao slide hafa, azafady? Ity dia latabatra amin'ny sidina natao tamin'io andro io talohanay. Raha mijery ny anarana sy ny isan'ny sidina ianao, ny ora fiainganan'izy ireo, mariho azafady - niainga tamin'ny 2:42 izahay, nanomboka tamin'ny 2:09 teo alohanay i Qatar. [00:15:22 video niato nandritra ny segondra vitsy]….
[00:15:37]… mikasika ny fanidiana ny seranam-piaramanidina, na ny fitifirana kilalao amin'ny sisiny, na aiza na aiza. Tsy nahalala ireo mpanamory fiaramanidina, tsy nahalala izy ireo satria tsy nisy fampandrenesana. Niasa ara-dalàna ny seranam-piaramanidina; tsy anjaran'ny mpanamory fiaramanidina sivily ny mahafantatra hoe iza no nitifitra, avy taiza ary inona no kendrena.
“Ary slide hafa. Ity ny latabatra sidina aorianay. Adiny iray sy efapolo minitra taty aoriana, ary adiny iray sy valo amby telopolo minitra aorianay, dia nisy orinasa Iraniana roa niainga ary avy eo nanohy niasa ara-dalàna ny seranam-piaramanidina, toy ny hoe tsy nisy na inona na inona nitranga.
“Noho izany, hamaranana ireo resaka rehetra ireo dia tsy te-hiteny mafy mihitsy aho fa mila milaza izany. Te-hiteny aho fa miditra amin'ny filohan'ny firenentsika, Andriamatoa Zelensky, amin'ny fangatahana ny manam-pahefana iraniana hanaiky tanteraka ny zava-nitranga, tsy nisy ',', 'misy fepetra' sns ... satria tsy maintsy mandray andraikitra feno izy ireo noho izay nanjo ny firenentsika, fanajana azy rehetra, ny maha-matihanina ary ny kalitaony.
[00:17:56 - ny mpanolotra fandaharana amin'ny fiteny ukrainiana dia manasa ny mpanao gazety hametraka fanontaniana sy hanazava ny fomba fiasa] [00:18:48 - fanontaniana avy amin'ny mpanao gazety iray:]
"Mr. Dykhne, onitra inona no antenain'i Okraina? Angamba vola vitsivitsy voalaza? Ho fanampin'izay, Andriamatoa Sosnovsky - Iran dia nahalala ny firongatry ny adin'ny tafika. Fa maninona izy no tsy nanidy ny lanitra akory? Inona ny hevitrao? Fa maninona no tsy izy ireo? Ho voatery nandoa karazana onitra, sazy ve izy ireo? Olana ara-bola ve izany sa nanapa-kevitra momba ny fisondrotana izy ireo? Ahoana ny fahitanao ny zava-nitranga? Misaotra anao."
[00:18:27 - Dykhne:] “Misaotra anao tamin'ny fanontanianao. Isika izao, amin'ny maha orinasa anay, dia manao raharaham-pitsarana tsy maintsy atao amin'ny famitana ny vokatr'ity loza ity. Noho izany, indrisy, tsy afaka milaza momba ny antenaina onitra aho, amin'ny fandoavana fiantohana amin'ny mpandeha.
Ny fantatro dia miasa amin'ny olana maro miaraka amin'ny faritra fito izahay, ary ny fandrosoan'ny fizotranay ara-dalàna rehetra dia horesahina amin'ny fotoana mety. Amin'izao fotoana izao dia tsy afaka milaza zavatra aminao momba izany aho, miala tsiny. ”
[00:20:50 - Dykhne:] “Azoko antoka fa tsy hisy fiatraikany lehibe amin'ny loza ataon'ny zotram-piaramanidina ity loza ity. Hiasa toy ny mahazatra ny orinasa. Hiatrika ny olana ara-toekarena aterak'ity loza ity isika; efa nohamarininay ity ary fantatray fa marina izany.
Izany no mahatonga ahy matoky fa ny làlana lavitra tokony halehantsika dia efa notetezin'ireo olona nanendry ny foiben'ny krizy mba tsy hisy fiantraikany amin'ny asan'ny orinasa mahazatra. Faharoa, azoko antoka fa hiova be eo amin'ny orinasa ny fahavalo volana Janoary.
Hiaina hatrany amin'ny vesatry ny loza isika. Tsy ho vitantsika mihitsy ny manova ny zava-nitranga, manova ny fahatsapantsika izany. Izany no antony ahazoako antoka fa hatanjaka ara-tsaina isika ary hankasitraka sy ho tia ny mpiasa kokoa noho ny teo aloha. ”
"Raha ny fanontanianao dia mieritreritra aho fa misy rafitra fitantanana risika ao amin'ny orinasa, izany hoe raha tsorina, ny fiaramanidina azo antoka indrindra no mijoro fa tsy manidina, ary ny mpanamory fiaramanidina azo antoka indrindra no mipetraka ao an-dakozia.
Noho izany, raha te hisidina ny fiaramanidina dia mila ampiasaininao izy ireo ary hanidina ihany izy ireo, satria tsy maintsy mahazo vola isika ary mahazo tombony: rahateo, orinasa ara-barotra izahay. Saingy ity rafitra ity dia mamela anao hanapa-kevitra amin'izay tsy tokony hanidinanao mihitsy. Izany hoe raha faritra mena isika, dia azo antoka fa tsy hanidina eo. ”
Tanteraka. Tsia, manana zavatra tena tsara isika ankehitriny, anio. Raha ny momba ny fiofanana momba ny mpiasa dia azoko lazaina izao fa tsy hoe tsy hanova zavatra fotsiny isika fa hiezaka hatrany ny hanao izay ataontsika. Amin'ny lafiny famaritana ny toerana hanidinana.
Ity dia rafitra iray manontolo mitambatra, izay tapa-kevitry ny orinasa iray manontolo, ao anatin'izany ny fiarovana, ny mpiasa an-tany, ny mpiasa teknika, ny mpiasa amin'ny sidina; tsy dia tsotra izany, ka tsy hanova na inona na inona izahay. Hanohy hanao izay ataontsika izahay. ”
“Fotoana fanemorana fahazarana tsotra izao. Nisy valizy be dia be sy enta-mavesatra be tamin'ity sidina ity. Noho izany, ny kapitenin'ny fiaramanidina, rehefa namaritra ny lanjan'ny fiaramanidina ary nahita ny tsy fitoviana, dia nanapa-kevitra ny hamoaka valizy avy tao amin'ny efitranon'ireo entana. Izany no antony nampihemorana ny sidina. ”
“Jereo, tsy afaka mamoaka vaovao momba ireo olona tsy niditra ny sidina izahay izao. Satria izy io dia ampiasaina amin'ny hetsika ara-dalàna sasany ataon'ny sampan-draharaha misahana ny lalàna izay manadihady ny teoria fianjerana. Izay nolazain'i Iran androany - mbola tsy manana porofo manamarina izany izahay. Ny kinovan'ny fanafihana mpampihorohoro mety mbola dinihin'ny masoivoho mpampihatra lalàna ary mivory amin'izy ireo izahay, manome vaovao mifandraika, fanambarana momba ny zava-nitranga, izay mpandeha nanidina rahoviana ary avy taiza, rehefa nanidina nankany Tehran, niaraka taminay izy ireo na tsia miaraka aminay, maninona no tsy niondrana an-tsambo izy ireo: ny fampahalalana rehetra azonay, nominay ny masoivohon'ny mpampihatra lalàna, ka azo antoka fa tsy manan-jo hanome hevitra momba izany izahay amin'izao fotoana izao. Raha holavin'ireo sampan-draharaha mpampihatra lalàna ho tsy manan-kery ity kinova ity dia azo antoka fa hampisy izany. "
[00:26:05 - fanontaniana iray avy amin'ny mpanao gazety:] “
Azafady mba lazao anay hoe inona ny hafatra farany avy amin'ny mpanamory fiaramanidina mankany amin'ny serivisy? Ankoatr'izay, oviana marina no nahalalanao fa tsy olana ara-teknika io, azo antoka fa tsy hadisoan'ny ekipa, satria mety ho nahazo ilay vaovao ianao talohan'ny namoahan'i Iran ny fanambarany ary angamba talohan'ny namoahan'ny praiminisitra kanadianina Justin Trudeau ny fanambarana nataony? Misaotra anao."
[00:26:13 - Dykhne:] “Manana manam-pahaizana manokana matotra sy mahay ao amin'ny orinasanay izahay (orinasa lehibe izahay). Noho izany, voajanahary, nanahaka ny toe-javatra ho an'ny tenantsika isika, izay safidy mety hitranga. Ho an'ny tenantsika manokana dia nanatsoaka hevitra fa, voalohany; nisy antony ivelany tokoa. Ny famakafakana nataonay dia nanala ny scenario hafa rehetra azo atao.
Noho izany, azontsika antoka hatramin'ny voalohany. “Nisy ny fanambarana fa tsy misy fifandraisana amin'ny fiaramanidina. Mandra-pahatongan'ny fahalalanay ny mpikambana ao amin'ny vaomiera mpanadihady misolo tena ny orinasa ao Tehran fa henony tamin'ny sofin'izy ireo izany fampahalalan'ny ekipa izany tamin'ny mpitantana ny fifamoivoizana, rehefa nohadihadiana ny fifandraisana amin'ireo mpitantana ny fifamoivoizana, ao anatin'ny fanadihadiana, izahay azo antoka fa nahita fa marina ny antsika. Izany hoe, tsy afaka nandre ny fiaramanidintsika isika. Ny seranam-piaramanidinay dia henon'ny seranam-piaramanidin'i Tehran. Nataonay antoka fa ny fifampiresahana tamin'ny seranam-piara-manidina dia natao hatramin'ny segondra farany. Mandra-pahatongan'ny segondra farany. Nomena alalana ny lalana; nomena alalana ny amin'ny fihodinana, sns. Ka izany rehetra izany dia ao anaty rakitra fisavana ankehitriny. Ary ireo antontan-taratasy rehetra ireo dia mety ho hita ara-potoana. ”
[00:28:30 - fanontaniana avy amin'ny mpanatrika:] “Inona no hafatra farany?”
[00:28:31 - Dykhne:] “Jereo, tsy afaka maneho hevitra amin'ny teny rehetra amin'ny fifampiresahan'ireo mpanamory fiaramanidina aho satria tsy manana porofo fanadihadiana. Manana ny tenin'ny mpiasanay telo izahay. Ho fanampin'izay, izahay dia matoky ny fahamarinany sy ny fahamarinany momba an'io raharaha io. Ihor, te hanampy zavatra ve ianao? ”
[00:29:20 - Sosnovsky:] “Te-hanampy fotsiny aho: Ireo teny ireo, raha ny marina, ny teny mahazatra: 'ary avy eo, mahazo avo sy mihodina.' Namaly izy ireo hoe: 'mihazavà ary miverena.' Izay ilay izy. Midika izany fa tsy nisy fifandraisana intsony taorian'izay, raha tsy nisy zavatra simba. Tsy misy fomba hafa. ”
“[00:29:30 - fanontaniana avy amin'ny mpanao gazety:]“ Salama. Arman Nazaryan, Kyiv TV Channel. Sarotra ny toe-javatra. Soa ihany, farafaharatsiny mba fantatsika hoe iza no tokony homena tsiny.
Izy ireo mihitsy no niaiky izany. Nilaza izany aho satria tsy tiako ho toy ny fiheverana ny karazan'olona meloka rehetra any Okraina ny fanontaniako. Fantatsika rehetra, eny, izay nitranga. Na izany aza, miresaka ny fahafatesan'ny olona isika, momba ny loza iray.
Noho izany, tsy afaka ny tsy hampiakatra ity olana ity aho. Ny orinasanao dia nanjary iharan'ny fanapahan-kevitra, amin'ny lafiny iray, amin'ny mpitondra politika. Fantatry ny rehetra ny fifanolanana tany Iran, sa tsy izany? Fantatry ny Amerikanina fa ho avy ny loza toy izany; Azo antoka fa fantatr'i Iran izany tamin'ny lafiny iray. Okraina, azoko antoka fa fantany koa izany - fa tsy azo antoka i Iran.
Lazao aminay, tsy mieritreritra ve ianareo fa ny filoham-pirenena ukrainiana Volodymyr Zelensky sy ny minisiteran'ny raharaham-bahiny any Okraina dia tompon'andraikitra amin'ny tsy fanapahan-kevitra handrara, ohatra, ny fiaingan'ny na sidina mankany Ukraine? Misaotra anao."
[00:30:20 - Hoy i Dykhne:] “Ny hevitro manokana. Mino aho fa nanatanteraka ny lalàna ny manampahefana Okrainiana.
Ampy ny fampahalalana milaza fa tsy avela hisidina mankamin'io faritra io ianao, araka ny fiheveranao azy, ary izany dia voaporofon'izay nasehon'i Ihor taminay momba ireo sary mihetsika.
Ny sidina avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao dia nanidina teo alohanay ary nanidina nanaraka anay. Mampalahelo fa afaka milaza isika fa ny toerana misy ny fiaramanidintsika dia tamin'ny fotoana tsy nety. Mety ho fiaramanidina hafa izay niasa tamin'izany fotoana izany tao amin'ny seranam-piaramanidina Tehran.
Sokafy ny app Flight Radar dia ho hitanao fa misokatra ny habakabaka ambonin'ny Tehran. Ny zotram-piaramanidina rehetra miasa ao dia manidina any izao. Noho izany, tsy fanapahan-kevitry ny tsirairay izany. Misy ny fanao iraisam-pirenena napetraka hamaritana izany. Voalohany, voafaritry ny firenena mifehy ny habakabaka izany.
Raha miresaka momba ny hoe rahoviana ary iza no mety ho nahafantatra tamin'ny haino aman-jery ny zava-mitranga ao, dia tsy fantatsika mazava izany. Heveriko fa olona marobe any Okraina no tsy nahalala ny zava-mitranga ao. Nisy fampahalalana momba ny fanafihana ny toby amerikana any Irak. Na izany aza, iza no nahalala hoe, avy taiza ary tamin'ny fomba ahoana? Ny tiako holazaina dia tsy misy ifandraisany amin'izany rehetra izany ny fiaramanidina sivily ary tsy misy ifandraisany amin'ny lalàna izany. Ka izaho, io no fiheverako manokana, heveriko fa tsy an'ny governemanta io, aleo ihany ny antsika. ”
[00:32:50 - fanontaniana amin'ny Okrainiana] [00:33:20 - Hoy i Dykhne:] “Sarotra amiko ny hanome hevitra momba an'io noho ny antony roa. Voalohany, ny olontsika dia tsy mpikambana ao amin'ny ekipanay fotsiny, fa olona 42 hafa koa avy any Okraina. Mandra-piverenan'izy ireo any Okraina, dia tsy hihetsika intsony izahay momba ny fizotran'ny fanadihadiana. Noho ny antony mazava aminao, antenaiko.
Izahay, mazava ho azy, dia mandray vaovao avy amin'ny olontsika. Izany no antony andraisan'izy ireo anjara amin'ny asan'ity komisiona ity. Azo antoka fa manamarika ho an'ny tenantsika ny zavatra hafahafa rehetra mety hitranga sy ny fiviliana amin'ny asan'ity komisiona ity isika. Saingy tsy hanome hevitra momba izany izahay izao. ”
“Momba ny fiverenan'ny fatin'ireo niharam-boina tamin'ny fianakavian'izy ireo. Any amin'ny hopitaly efatra samihafa ny razana. Raha ny angom-baovao nataoko dia tsy manana fitaovana sy fitaovana ilaina ny mpitsabo hatreto. Avy any Iran izy ireo, ary eo ny havany. Ny Minisiteran'ny raharaham-bahiny Okrainiana dia manao izay fara heriny mba hamerenana ny fatin'ireo Okrainiana maty tany Ukraine. Ankoatr'izay, misy ny fanantenana hiverina izy ireo miaraka amin'ny fiaramanidina mpitatitra entana izay nitondra ny vaomiera ary any Iran ankehitriny.
Ity dia fiaramanidina mpitondra entana, manana ny fahaizany izy, saingy tsy fantatsika ny fahavononan'ny Iran hamita ny fombafomba rehetra, ny raharaham-bahiny, haharitra hafiriana. Soa ihany, sambany isika niaina io toe-javatra io. Ho fanampin'izany, ny zavatra niainan'ny tranga hafa amin'ity karazana ity dia tsy dia mitovy loatra amintsika ka afaka mamorona fehin-kevitra ary milaza fa raha izany, dia izany. Samy manana ny fombany ny firenena, ary firenena sarotra i Iran. ”
[00:36:30 - Sosnovsky:] “Araka ny lalàna mifehy ny fanadihadiana natolotry ny ICAO, ny antoko manao ny fanadihadiana, amin'ity tranga ity, ny firenena nitrangan'izany, Iran, dia tsy maintsy mandefa tatitra fanampiny ao anatin'ny telopolo andro. Izany hoe, amin'ny fomba malefaka, ao anatin'ny iray volana, amin'ny 8 Febroary. ”
[00:37:09 - fanontaniana amin'ny teny Anglisy, izay avy eo nadika tamin'ny fiteny ukrainiana:] Reporter avy amin'ny CNN - “Toa efa nilaza mazava ianao fa na ny tompon'andraikitra Okrainiana na ny tompon'andraikitra Iraniana dia tsy nahavita nampitandrina ny zotram-piaramanidina momba ny loza mety hitranga eny an-danitra ka maninona ianao no matoky fa hanao tsaratsara kokoa izy ireo amin'ny ho avy? Moa ve tsy misy adidy tokony hataon'ny kaompaniam-pitadiavana hanao fikarohana samirery na hanaraka ny tatitry ny haino aman-jery aza fa mety hisy loza na fanafihana an'habakabaka tato ho ato. Avy eo tampoka ny Filoham-pirenena dia nanao fampitandremana mazava fa manantena onitra avy any Iran izy. Raha tsy handoa i Iran dia hanome onitra ny fianakavian'ireo mpandeha ve ny kaompaniam-pitaterana? ”
[00:35:15 - Dykhne:] “Matoky ireo andrim-panjakana fiaramanidina sivily iraisam-pirenena izahay. Ireo dia rafitra iraisam-pirenena voamarina amin'ny firenena rehetra. Manaraka fitsipika iray ihany izy ireo. Any Okraina, any Iran, any Eropa, any Etazonia. Noho izany, tsy azontsika atao ny mametra-panontaniana momba ny fihetsik'ireto andrana ireto raha tsy hoe manontany tena momba ny fihetsiky ny andrimpanjakana iraisam-pirenena.
“Ka ny zotra an'habakabaka dia miasa amin'ny fomba taloha ihany, araka ny lalàna iraisam-pirenena. Mikasika ny fanonerana: azoko fa niresaka momba ny fifampiraharahana eo amin'ny fitondrana ny filoha momba an'io olana io, izay mety tsy ho ilay zotram-pitaterana an'habakabaka. Mazava ho azy fa manohana ny toeran'ny filohantsika izahay.
Ny tambiny hafa rehetra, ny fandoavana fiantohana, izay voalazan'ny lalàna, izay andraikitry ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, dia hatao mifanaraka amin'ny lalàna iraisam-pirenena sy ny fifanarahana fiantohana rehetra. Ary raisinay andraikitra lehibe ity olana ity; fantatray ny andraikitray amin'ireo mpandeha.
Hanaraka izany amin'ny fomba feno isika. ”
[00:40:10 - Sosnovsky amin'ny teny anglisy:] “Te-hanampy an'ity valiny ity aho raha tianao - Salama? Te hanampy zavatra kely fotsiny amin'ilay fanontaniana napetrakao aho. Toy izao ny valiny. Matoky ny governemanta Iraniana izahay, izany no nahatonga anay hijanona tsy hanidina. ” [Nanontany ny mpanao gazety CNN:] “
Maninona ianao no hatoky azy ireo amin'ny ho avy, maninona… ”[Sosnovsky amin'ny teny anglisy manohy, manelingelina ilay manontany:]“ Tsy misy resaka momba ny ho avy, nijanona tsy nanidina izahay. Nijanona tsy nanidina ny faritanin'i Iran izahay… Niato ny sidina nankany Iran amin'izao fotoana izao, ary ny làlana hafa rehetra, avelao izahay hiteny Dubai, nanova ny làlana izahay ary tsy manidina ny fanjakana Iraniana. Noho izany, hiresaka momba ny fahatokisana isika amin'ny ho avy. ”
[Manontany ny mpitati-baovao CNN:] “Tokony hiova ve ny politikanao?”
[Mitohy i Sosnovsky amin'ny teny anglisy, nanelingelina ilay nanontany:] “Niova sahady… niova sahady… niova sahady…”
[Manontany ny mpitati-baovao CNN:] “Tokony mba nanao fikarohana fantatrao ve ianao, na dia ny fanarahana ny fampitam-baovao momba ny fitokonana balafomanga aza any an-toerana?”
[Sosnovsky amin'ny teny anglisy:] “Hataonay io antoka io, fa raha hanao izany isika dia tsy maintsy manao tombana amin'ny risika, hataontsika azo antoka.”
[Manontany ny mpitati-baovao CNN:]
“Fa raha nanao zavatra tamin'ny fomba nitovy tamin'ny azy ianao raha afaka manao izany indray, miaraka amin'ireo zavatra fantatrao?” [Sosnovsky amin'ny teny anglisy:] “Mila ny tokony hataontsika, dia hataontsika.”
[Manontany ny mpitati-baovao CNN:] “Manontany aho raha toa io fanapahan-kevitra io ihany ve ny manidina anio, raha misy ny toe-javatra mitovy?”
[Sosnovsky amin'ny teny anglisy:] “Araka ny ahitanao ny zavatra resahiko. Nijanona tamin'ny sidina nankany Iran izahay noho ny fahatokisantsika azy ireo. Heveriko fa izany no valiny satria nanova ny politikantsika izahay. ”
[00:41:40 - fanontaniana amin'ny fiteny Okrainiana] [00:41:41 - Valin'i Dykhne:]
“Vao henonao ny hevitra avy amin'ny filoha lefitra misahana ny sidina. Vao avy nampiseho ireo làlana manan-tantara rehetra nananantsika izy. Ity sidina ity dia ao anatin'ny làlan'ny làlambe manan-tantara antsika, ary tsy nisy fiviliana.
Ankoatr'izay, rehefa voafaritra ny fifamoivoizana amin'ny sidina, voalohany, eo amin'ny sehatry ny seranam-piaramanidina, ireo zotra hahatongavana sy fiaingana ireo dia faritan'ny seranam-piaramanidina Tehran ary napetraka ao anaty rafitra manokana. Izany hoe, misy làlana sasany izay iandraiketan'ny seranam-piaramanidina.
Ary ny sidinay dia iray amin'ireo làlana voafaritry ny seranam-piaramanidina ary miasa ao anatin'ny sahan'ireo baiko voaray avy amin'ny mpanara-maso ny fifamoivoizana, izay vao niresaka. Nisy ny fifandraisana, nisy ny fifandraisana tamin'ny mpanara-maso ny fifamoivoizana, ny mpanara-maso dia nanome torolàlana momba ny fomba hirosoana amin'ilay zotra; torolàlana mahazatra tokoa ireo izay saika mitovy amin'ny isaky ny fiainganana avy any Tehran.
Ka mety tsy nisy insinuations momba ny fanovana ny zotra. Misaotra anao."
[00:43:27 - fanontaniana iray avy amin'ny mpijery, tsy mazava, avy eo nilaza ilay mpanolotra hoe:] “Miala tsiny fa tsy maheno anao ny mpandika teny ary tsy maheno anao ny mpiara-miasa aminao. Ka mba atsangano mialoha ny tananao, tsy mila miantsoantso ianao. Azafady… Okay, omeko anao izao ny mikrô. ”
[00:43:46 - Sosnovsky:] “Naheno azy ihany koa aho. Mieritreritra aho fa hamaly alohan'ny lahateninao. Tsy manan-jo hilaza izay nolazain'izy ireo aho. Amin'izao fotoana izao. Tsy rariny izany, tsy mety izany. Andraso vetivety. Tsy hoe manan-jo hilaza izany aho satria fitaovana famotopotorana fotsiny io. Novaliako fotsiny ilay rangahy fa misy fehezanteny mahazatra momba ny fiainganana sy ny fialana amin'ny faritra misy ny seranam-piaramanidina, izay nataon'ireo mpiasa tao amin'ilay taratasy. ”
[00:44:14 - mpanao gazety:] “Nanome hevitra i Iran fa niova lalana ny fiaramanidina, ary izany no antony…”
[00:44:16 - Sosnovsky:] “Indray mandeha ihany koa, fa niova lalana ilay fiaramanidina dia afaka jerentsika amin'ny fampiharana Flight Radar. Hitanao izany amin'ny app Flight Radar. ”
[00:44:16 - olona avy amin'ny mpijery:]
“Tsy marina izany!”
[00:44:19 - nanamarina ny fanontaniany ilay mpanao gazety:] “Mangataka hevitra aho; milaza izy ireo fa novaina ny lalana, ka notifirin'izy ireo ilay fiaramanidina. ”
“Azafady mba diniho indray ity sary ity, azafady.
Ny fivoahana mahazatra avy amin'ny seranam-piaramanidin'i Tehran dia 7,000 metatra amin'ny tsipika mahitsy. Rehefa avy niampita haavo 6,000 haavo izy, mazàna, tany Iran, manome anao lalana hatreo izy ireo. Raha mijery ny tetika rehetra teo aloha ianao dia efa toy izany foana nandritra ny dimy taona.
Ity tetik'asa ity dia tsy misy hafa amin'ny an'ny teo aloha rehetra. Rehefa avy niampita 6,000 metatra ny sidina dia nivily nankany amin'ny toerana fivoahana mifanaraka amin'ilay lalana. [Manomboka miteny ilay mpanentana, fa manelingelina azy i Sosnovsky.] Raha tianao dia azonao atao ny mijery indray ity sary ity, ilay teo aloha, ary izahay rehetra.
Anjarantsika rehetra izao, manomboka amin'ny 2 Novambra 2019. ”
[00:45:01 - fanontaniana avy amin'ny mpanatrika:] “Ka tsy voamarina ny tatitra Iranianina, tsy niova ny fampianarana?”
[00:45:08 - Sosnovsky:] “Tsy nilaza an'izany aho. Miala tsiny aho. Tsy nilaza aho fa tsy niova ny taranja. Misy zavatra sasany izay mbola tsy voamarina. Tsia. Nilaza aho fa tsy mbola voamarina hatramin'ny voalohany fa ny fiampangana Iraniana dia natao ho an'ny haino aman-jery iray manontolo… fa tsy nifandray mihitsy ny ekipa hatramin'ny nialan'ny. Marina izany. ”
[00:45:28 - fanontaniana avy amin'ny mpanatrika:] “Dia niova ve ny fampianarana sa tsia?”
[00:45:29 - Sosnovsky:] “Indray mandeha indray. Hitanao fa novaina ny fampianarana. Niova 15 degre ho lasa ankavanana, izay tokony halehany, araka ny baikon'ny mpitondra ny fifamoivoizana. ”
[00:45:40 - miteny amin'ny fiteny ukrainien ilay mpanolotra]
[Manontany ny mpanao gazety iray:] “Manana fanontaniana aho. Voalohany, inona ny atmosfera ao amin'ilay orinasa ankehitriny? Inona no tsapan'ny olona? Izay no fanontaniako voalohany. Ary faharoa, efa hitanao ve ny fihenan'ny isan'ny sidina fiaramanidina anao? Raha izany dia hitaky ny onitra avy any Iran ho toy ny singa iray manimba ianao, ary ohatrinona? ”
[00:46:08 - Hoy i Dykhne:] “Telo andro izay, ka tsy afaka manombana ny varotra ataonay izahay. Ohatrinona, amin'ny fomba tsotra, ny fahatokisan'ny mpandeha anay dia mety ho voahozongozona. Heveriko fa ny hafatra androany avy amin'ny manampahefana Iraniana dia tokony hanamafy fa marina ny momba ny fiarovana ny sidina ataontsika. Ary antenaiko fa mbola hanana fahatokisana ampy amintsika ny mpandeha.
Raha ny momba ny tambin-karama mety, tsy vonona ny hiresaka an'io olana io aho dieny izao. Ireo dia raharaha ara-dalàna, izay horaisina ao anaty andiam-pakan-kevitra miaraka amin'ireo manampahefana ao Okraina. Tsy avy amin'ny orinasa irery. ”
[00:47:30 - feo tsy mazava avy amin'ny mpanatrika:]
[00:47:32 - Hoy ihany i Dykhne:] Mazava ho azy fa malahelo ny mpiasan'ny orinasanay toa ny olona rehetra ao Okraina. Heveriko fa tsy ny alahelontsika ihany io fa tsy ny olantsika ihany. Na izany aza, ny mpiasa dia efa zatra, niofana ary mahay manao tsara ny asany. Ary antenaiko tokoa fa ity fahantrana ity dia hanampy firaisan-kina sy fitiavan-tanindrazana ho an'ilay orinasa, ka hanatsara kokoa ny asany amin'ny lafiny rehetra.
[00:48:14 - fanontaniana iray:] Azonao atao ve ny milaza aminay, nilaza ianao fa mikasa ny… tsara, misy fanantenana fa hoentin'ny fiaramanidina mpitatitra entana ny razana? Ny vatana rehetra ve sa ny fatin'ireo niharam-boina Okrainiana fotsiny? ”
[00:48:29 - Dykhne:] “Tsy afaka milaza aminao aho hoe hanao ahoana izany. Tsy haiko fotsiny. Ny tiako holazaina dia tsy haiko hoe… inona no hataon'ny komisiona any…
Midika izany fa tapaka eo no ho eo izany. Any Iran. Fantatro fa izany no fikasana tany am-boalohany. Tamin'izany no nandefasana ilay fiaramanidina mpitondra entana. Ary misy ny fanantenana, raha voahodina haingana ny vaovao rehetra ary vonona hanome ny fatin'ireo niharan-doza i Iran, dia vonona handray azy ireo i Okraina.
Raha mitondra ny vatana mangatsiaka rehetra any Okraina ny fiaramanidina mpitondra entana Okrainiana, amin'ny maha-orinasam-pitaterana an'habakabaka anay dia vonona izahay hitondra azy ireo any amin'ireo tanàna misy ny havan'ireo niharam-boina avy any Kyiv. ”
Kitiho raha misintona ny transcript ho PDF
Ny zotra sy ny fikambanam-piaramanidina afrikanina hitarika ny fitomboan'ny tsenan'ny fiaramanidina afrikanina
Maninona i Japon no toerana malaza indrindra ho an'ireo mpizahatany sinoa?